Real estate – Sale - မလိခအိမ်ရာရှိ_တိုက်ခန်းရောင်းမည်။ | Free classifieds ads | Myanmar marketplace | Myanmarkt
တိုက်ခန်း classified: မလိခအိမ်ရာရှိ_တိုက်ခန်းရောင်းမည်။
2 ရက် မတိုင်ခင်
#သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်_လူကြိုက်အများဆုံးအိမ်ရာ_တစ်ခုဖြစ်သောမလိခအိမ်ရာရှိ_တိုက်ခန်းရောင်းမည်။ သဃ်န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မလိခအိမ်ရာ ရတနာလမ်းမအနီး၊ ကားပါကင်အဆင်ပြေ ပေအကျယ်(25´×25´), 2-Floor. 1-Master Bedroom, 2-Bedroom. Air-con(3)လုံး၊ ပါကေးခင်း ပြင်ဆင်ပြီး။ စျေးနှုန်း _ 470 သိန်း 09-752757547. 09-250998522. 09-340185131.
သုမနလမ်းမ၊ Mini Condo ရောင်းမည်